UKUQHUBEKA KWE-AQUARIUS KUTHANDO LWESIBINI
Kwinqaku langoku siza kuthetha ngalo Ukuhambelana kwe-aquariumKe, ukuba unomdla wokwazi ukuba loo nkwenkwe okanye loo ntombazana ikulungele, sukuma kwaye uqhubeke, siya kufumanisa.
1 Ukuhambelana kwe-Aquarium
1.1 U-Aquarius kunye neScorpio
1.2 I-Aquarius kunye neCapricorn
1.3 U-Aquarius kunye noTaurus
1.4 U-Aquarius noLeo
1.5 U-Aquarius kunye no-Aquarius
1.6 I-Aquarius kunye neCancer
1.7 U-Aquarius kunye neSagittarius
1.8 U-Aquarius kunye no-Aries
1.9 U-Aquarius kunye noGemini
1.10 U-Aquarius kunye neLibra
1.11 I-Aquarius kunye nePisces
1.12 U-Aquarius kunye noVirgo
Khumbula ukuba ii-aquariums ngabantu abazimeleyo kakhulu, ukongeza kwinto yoqobo kunye nezinto ezintsha, abazithandi ukuphinda iinkqubo kodwa bazenze ngendlela yabo kwaye ke batsale umdla.
Umoya wabo wokuzilolonga ubenza bajonge kumaqabane abo baziva bekhuselekile kwaye bangachithi xesha, kuba bekhetha ukuhlala bodwa, bekwazi kakuhle oku, inokuba yeyona nto iphambili yokugcina ubudlelwane no-Aquarius.
U-Aquarius kunye neScorpio
Simanya amanzi nomoya, okhokelela kukungangqinelani okuphantsi, ngabantu abanobuntu obahluke ngokupheleleyo, ngamnye kubo unendlela ekhethekileyo yokuthetha nokwenza izinto, enokuthi ivelise amatyala kunye neempikiswano phakathi kwabo.
Nangona besabelana ngomoya wabo wokucela umngeni ukujongana neengxaki okanye iimeko ezivelayo, ezinokunceda ekuqondeni kwabo, kuba bengabantu abanxibelelana kakhulu, kwaye ngencoko yababini banokufikelela kwisivumelwano kwiingcinga zabo.
I-Aquarius kunye neCapricorn
Banokuhambelana okuphezulu, kodwa oku kuyachaphazeleka kukukwazi kwabo ukumamelana kwaye baguqule iyantlukwano yabo ibe ngamanqaku amahle kubudlelwane babo, ukuba abakwenzi oku, banokulaliswa kwaye iingxaki zinokuloyisa uthando abanokuba nalo. Phakathi kwazo zombini.
Elinye inqaku lokuhoya kolu dibaniso kukukwazi kokubini ukubandakanyeka kwizigidi zemisebenzi phakathi komsebenzi, usapho kunye nabahlobo, enokuthi ivelise umgama phakathi kwabo.
U-Aquarius kunye noTaurus
Icala lokugcina iTaurus, linokungqubana nokungaqiniseki kwe-Aquarius, oku kwenza ukuba le miqondiso ingahambelani, ngaphandle kwale nto ingxoxo enkulu phakathi kwale miqondiso mibini kukuqaqadeka kweempawu zeTaurus, kudityaniswe nemibono engqongqo yeAquarius , inokubangela ubudlelwane ukuba bube noxinzelelo.
Nangona kunjalo, ukuba kukho uthando kunye nonxibelelwano, akukho ntlekele ingenakoyisa le miqondiso mibini.
Zizinto ezichaseneyo ezitsala omnye komnye, ke ngoko, banokuba nolwalamano olupheleleyo lothando kunye namandla, apho ukwahluka kwabo kuya kubanceda kuphela, okoko nje kukho uthando phakathi kwabo. Banokuba liqela elikhulu, basebenze kunye ukufezekisa iinjongo zabo.
U-Aquarius kunye no-Aquarius
Ukuhambelana phakathi kwaba babini kukhulu kakhulu kwaye ngubani ongcono yokuqonda imeko ye-Aquarius kuno-Aquarius ngokwakhe, bahlala bengabantu abanomdla kakhulu, banika ukubaluleka kakhulu kubuhlobo, ngaphandle kokuba nobuntu obuphumayo. Bafezekisa ibhalansi egqibeleleyo phakathi kothando kunye nokuqina.
Inqaku elibi kwesi sibini kukuba bahlala betshintsha kakhulu kwaye bengalindelekanga, kwaye oku kunokubangela isiphithiphithi kubudlelwane, kuba bobabini banjalo.
Olu dibana ngumceli mngeni wokwenene, ukungqinelana kwabo kuphantsi, kodwa ukuba isibini sizimisele ukuqondana, uthando kunye nomzamo wokusebenzisana unokwenza isibini esonwabileyo, esizinzileyo kunye nesisigxina. Ngomonde nokunyamezelana njengesikhokelo esiphambili, ukuze kufezekiswe ukuqonda okupheleleyo phakathi kwezi zimbini.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda malunga Iimpawu ezihambelana neVirgo, ngenisa ikhonkco kwaye wonwabele lonke ulwazi ekufuneka silunike.
U-Aquarius kunye neSagittarius
Banethuba eliphezulu kakhulu lokuba nobudlelwane obunomtsalane kunye neminye imiqondiso, bobabini banokufana okuninzi kubuntu babo, bahlala bengabantu abagcwele amandla kwaye abangoyikiyo kutshintsho kunye nokuzonwabisa, bayathanda ukonwaba nokuphuculwa kunye nezicwangciso ezizenzekelayo, bayonwabile baziva ukuba bobabini kunye neqabane labo bakhululekile.
Banokufikelela kwinqanaba eliphezulu lonxibelelwano kunye nokukwazi ukuyiqonda enye, ingxaki ngezi mpawu kukuthambekela kwabo okuphezulu kokuziva bezimeleyo kwaye bazalisekise ngokukodwa, okunokuvelisa umgama othile phakathi kwabo.
U-Aquarius kunye no-Aries
Le miqondiso inokuhambelana okuphezulu, oku kungenxa yeempawu zabo ezifanayo ezifana nomoya wabo ozimeleyo, indlela yabo yokuhlala bejonge kwicala lezinto ezilungileyo kwaye bangayeki bade bahlangane neenjongo zabo. Enye yeengxaki zabo ezinkulu kuxa ama-Aries efuna ukubeka ezabo iinjongo okanye umdla ngaphezulu kwento ecingwa liqabane labo.
U-Aquarius kunye noGemini
Bayancedisana ngokwengqondo nangokweemvakalelo, le miqondiso mibini inokwenza isibini esigxile kakhulu, esizinzileyo kwaye sigcwele iiprojekthi eziza kuzalisekiswa, iGemini yeyakwa-Aquarius leyo nkwenkwe okanye intombazana eza kwenza iprojekthi nayo ebomini bayo, bayayonwabela inkampani kunye neengxoxo nomnye. Ziyimbonakaliso yolonwabo ngonaphakade.
U-Aquarius kunye neLibra
Banobudlelwane obuphakamileyo, phakathi kweempawu zabo eziphambili kukuba bobabini bayathetha kwaye banobuntu, banesangqa esikhulu kakhulu sabahlobo, bahlala bekhululekile kwaye banika amaqabane abo indawo, balixabisile ixesha bodwa kwaye liyahlonitshwa. Bangaba nolwalamano oluhle kakhulu kwaye ngaphandle kweengxaki ezininzi.
I-Aquarius kunye nePisces
Isiseko salo naluphi na ulwalamano lwale miqondiso mibini kufuneka lube luthando kunye nokuqonda phakathi kwezi zibini, zihlala ziyimpawu ezihambelana ngakumbi zobuhlobo kunobuhlobo.
Batyekele ekugcineni isimo sengqondo esihle kunye nethemba ebomini kwaye oko kuyanceda kubudlelwane babo, nangona kunjalo, banendawo ngokuchasene nayo, eyokuba bathambekele ekulindeleni ikamva, bacinga kakhulu ngezicwangciso zabo, iinjongo zokufezekisa kwaye bayathanda ukuba nayo yonke into iququzelelwe, ewe Oku akulawulwa ngandlela thile kunokunyanzela ukuphela kobudlelwane, ukuba bobabini abaqinisekanga ukuba ufuna ntoni okanye ulitsalela njani ikamva lakhe.
U-Aquarius kunye noVirgo
Kuthiwa ukungqinelana phakathi kwale miqondiso mibini yeyona iphantsi kunayo yonke indibaniselwano enokwenzeka, kwaye nangona iindaba zingakhuthazi kakhulu, singatsho ukuba uthando lunokuhlala lomelele.
Iingcinga zakho ngobomi zinokungqubana, ezinokuthi ziqhekeze ubudlelwane, zikhokelele kwinto yokuba akuqhelekanga kakhulu ukuba le miqondiso mibini itsaleleke komnye komnye.